के एचआईभी संक्रमित आमाबुवाबाट जन्मन्छन् स्वस्थ बच्चा ? | Ratopati
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर ८, २०७८ chat_bubble_outline0
प्रस्तुत छ, एचआईभी संक्रमित आमाबुवाबाट जन्मेका बच्चा सय प्रतिशत कसरी स्वस्थ हुन्छन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रही शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालकी मेडिकल अफिसर डा.लीना देवकोटासँग रातोपाटी डटकम प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीः
१५÷१६ वर्ष अगाडि एचआईभी संक्रमणलाई ज्यानमारा रोगको रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यस समयमा सबैलाई पुग्ने गरेर औषधि आइसकेको थिएन । हाल भएका अनुसन्धानहरुले एउटा मात्रै पिल रातीको एक पटक खान मिल्ने बनाएको छ । संक्रमित आमाले राम्रोसँग औषधि खाएर आप्mनो भाइरल लोडलाई कम राखेकी छन् भने ती महिलाबाट सय प्रतिशत स्वस्थ बच्चा जन्मन्छ । त्यसैले सावधानी अपनाएर डाक्टरको निगरानीमा बसेर औषधि खाई जन्माएका बच्चा अन्य शिशुसरह स्वस्थ हुन्छन् ।
यदि श्रीमान एचआईभी संक्रमित छन् तर, श्रीमती संक्रमित छैनन् तर उनीहरुले बच्चा जन्माउने योजना बनाएछन् भने एचआईभी संक्रमित श्रीमानले औषधि खाएर भाइरल लोड कम गराएको हुनुपर्छ । साथै, स्वस्थ श्रीमतीलाई पनि एचआईभीकै औषधि सेवन गराउनुपर्छ । यस्तोमा ‘प्रि एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस’ औषधि ख्वाउछौँ अर्थात् रोग लाग्नुभन्दा अगाडि एचआईभीको औषधि ख्वाइन्छ । जवसम्म गर्भ बस्दैन, तबसम्म यो औषधि ख्वाइन्छ । गर्भ रहेपछि औषधि ख्वाउन बन्द गछौँ । गर्भ रहेर औषधि बन्द गरेपछि श्रीमान श्रीमतीविच कुनै पनि सम्पर्क हुनु हुँदैन । यसरी आमा पनि सुरक्षित हुन्छिन् भने ती आमाबाट जन्मेको बच्चा पनि सुरक्षित रहन्छ । आमामा एचआईभी नेगेटिभ भएपछि बच्चामा पनि स्वतः नेगेटिभ नै हुन्छ ।